Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football any Italiana Federico Bernardeschi Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Facts
LB dia manolotra ny tantara feno momba ny kintan'ny Football iray amin'ny anaram-bositra hoe “Brunelleschi'. Ny Federico Bernardeschi Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny Fiainana sy ny Fiakaran'ny Federico Bernardeschi. Sary: ThePlayersTribune, Wallpapercave ary Gianlucadimarzio
Ny famakafakana feno dia ahitana ny fiainany voalohany, ny fiainam-pianakaviana, ny fanabeazana / asa amam-panabeazana, ny fiainam-piasana voalohany, ny lalana mankany amin'ny laza, ny firongatry ny laza, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainam-pianakaviana, ny zava-misy momba ny fiainam-pianakaviana, ny fomba fiainany ary ny zava-misy kely fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra izy no iray amin'ireo fanantenana mahaliana sy manan-talenta faratampony any Italia noho ny fahatsarany sy ny masony akaiky indrindra. Na izany aza, vitsy ny mihevitra ny tantaram-piainan'i Federico Bernardeschi izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Federico Bernardeschi Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Federico Bernardeschi dia teraka tamin'ny andro 16 tamin'ny volana febroary 1994 tamin'ny reniny izay Zaza mpitaiza sy rainy, Alberto Bernardeschi (mpiasa amin'ny marbra) tany Carrara, faritra ao Tuscany, Italia. Ity ambany ity ny sary tsara tarehy amoron-dranomasina an'i Federico Bernardeschi kely fony mbola zaza.
Sary tsy fahita firy an'i Federico Bernardeschi tamin'ny mbola kely. Sary: ThePlayersTribune
Federico Bernardeschi dia avy amin'ny fianakaviany avy any Carrara, tanàna any afovoan'i Italia izay fantatra amin'ny anaram-bosotra malaza antsoina hoe; 'Ilay tanànan'ny marbra'. Izao ny fanontaniana:… Nahoana no ny tanànan'ny marbra? ... Ny antony dia satria i Carrara dia malaza amin'ny marihitra marbra Carrara fotsy izay tsara tarehy. Fantatrao ve?… Ny tanànan'ny marbra araka ny marihana eto ambany ihany koa dia ny toerana nahaterahany sy fonenan'ny mpiambina ny zon'ny mpifaninana italiana Gianluigi Buffon.
Saripika tsara an'i Carrara (Ny tanànan'ny marbra) izay ananan'i Federico Bernardeschi ny fiaviany ara-pianakaviana. Ny tanànan'ny marbra. Sary: carraramarbletour ary Pinterest ary TuscanyPrivateTour.
Iray amin'ireo ray aman-drenin'i Federico Bernardeschi- dadany niasa tao amin'ny orinasa marbra iray tao an-tanàna nandritra ny fahazazany. Tahaka ny ankizy maro be, sy ny ray aman-dreny be atao, i Federico dia nahita ny dadany isaky ny hariva Alberto Mety hiasa ora maro, tafakatra avy am-pandriana amin'ny 5 maraina, miala ao an-trano alohan'ny 6 maraina ary hody any amin'ny 6 hariva, ka i Federico dia nandany betsaka tamin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany tamin'ny reniny sy ny rahavaviny, Gaia.
Ilay mpisolovava ilay laharana miaraka amin'ny Ball Soccer: Rehefa telo taona i Federico Bernardeschi, nentin'ny dadany nankany amin'ny fivarotana kilalao faobe tao amin'ny tanàna afovoany ao Carrara. Rehefa nandray dingana roa tao anaty fivarotana i Federico tanora, ny voalohany dia nitafy dia baolina kitra iray. Avy hatrany dia nihazakazaka nankany izy avy eo, nalainy ary nilaza tamin'ny dadany hoe tonga ny ora. Alberto dia tian'i Federico hijery ny kilalao hafa, saingy tsy nety nanizingizina izy fa ny baolina kitra fotsiny no notadiaviny.
"Satria hitako izay tadiaviko hoe" baolina kitra ", tsy navelako hisy hifehy izay tsy tokony hataoko. Izany no toetrako na tokony holazaiko, izany no toetran'ny olona avy amin'ny ankohonako. Ny olona avy any Carrara dia mafy tahaka ny marbra - Mba hahazoana fampahalalana bebe kokoa, manontany Gigi Buffon. "
Federico Bernardeschi Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Fanabeazana sy fanabeazana
Tany am-piandohany tamin'ny fiainany dia nanao safidy farany i Federico amin'ny faniriana ho mpilalao baolina matihanina. Tamin'ny voalohany, nisy ny fanamby tamin'ny fikatsahany haka ny fanabeazana baolina kitra tsara indrindra. Tany amin'ny faritra onenan'i Federico, ao amin'ny tanànan'ny Marble, dia tsy ampy firy ny tanora tanora manodidina. Avy eo, ny ekipa tsara indrindra amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy, ASD Sporting Atletico Carrara tsy nanolotra izay tian'ny ray aman-dreniny rehefa nandany fotoana kelikely niaraka tamin'izy ireo.
Mba hahazoana ny tsara indrindra ho an'ny zanany lahy dia tsy maintsy nisafidy ny ray aman-drenin'i Federico Bernardeschi. Samy nanaiky ny reniny sy ny dadany fa ny zanany lahy hiala ny sekoly aloha 3: 15 am (45 minitra alohan'ny hifaranan'ireo kilasim-pianarana) mba handeha hilalao baolina miaraka amin'ny oniversite vaovao.
Federico Bernardeschi Fiainana Karakarao voalohany sy Atletico Carrara. Credit: IG
Tamin'ny faha-valo taonany dia nanomboka nahazo ny fanabeazana baolina aminy i Federico Bernardeschi Polisportiva Ponzano, ivontoeram-panofanana momba ny baolina kitra nifandraika tamin'i Empoli, manodidina ny 70 kilaometatra tsy lavitra ny tranon'ny fianakaviany. Rehefa afaka izany, ny reniny dia haka azy avy any an-tsekoly isan'andro alohan'ny fotoana hanidiana fotoana, anaovy misakafo aminy (matetika pasta) ary avy eo ento mankamin'ny Empoli miaraka amin'ny volondohan'ilay fianakaviana izy Opel Vectra. Miresaka momba ny traikefa isan'andro ThePlayersTribune nametraka azy, i Federico Bernardeschi indray mandeha no nilaza;
“Satria fantatro fa tara kely aho matetika. Mila mamatotra ny kiraroko amin'ny fiara aho. Zara raha hijanona i Neny. Rehefa tonga aho dia hitsofika eny an-kianja aho vao hahatakatra ny fotoam-piofanana azoko. Roa ora taty aoriana dia hifarana ny fiofanana amin'ny baolina kitra ary miverina amin'ny lalana lasa izahay. ”
Na dia rehefa nody avy tany an-tsekoly sy sahirana aza izy, dia ny ray aman-drenin'i Federico Bernardeschi sy ireo mpianakavy hafa nahafantatra fa izy Natokana ho an'ny zavatra lehibe izy ireo satria mbola hijery azy hijery ny fahaizany.
Fantatrao ve?… Tsy ho eo am-pandriana i Federico raha tsy 10: 30 hariva na 11 hariva isaky ny hariva, avy eo mifoha maraina ianao hanao izany indray. Ny fahavononany sy ny asa mafy toy izany taty aoriana dia nandoa ny anjarany. Rehefa nantsoin'i Federico Bernardeschi hanatrika fitsarana miaraka amin'i Florentina, ny fireharehan'ny fianakavian'ny fianakaviana rehetra (izay nijanona teo aminy tamin'ny diako rehetra) tsy nanana fetra.
Federico Bernardeschi Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Fitsapana mahomby dia nahita an'i Federico Bernerdeschi tamin'ny taona 2003 (tamin'ny taona 9) manatevin-daharana ny elatry ny Akademia Fiorentina. Florence, ilay tanàna misy ny klioba dia somary lavitra atsinanan'i Empoli, amin'ny làlan-kaleha mitovy amin'i Federico sy ny reniny.
Tany am-piandohan'ny asany, ny dadan'i Federico Bernerdeschi dia manosika ahy hanao zavatra tsara kokoa ary mahatsiaro ho tezitra aminy noho ny fotoana tsy ampoizina rehetra. Ao anatin'ny tolo-dalàna hitantana ny tsindry noforonin-drainy, hoy i Federico, indray mandeha;
“Rehefa zaza ianao, indraindray mahatsapa be loatra indrindra fa avy amin'ny raim-pianakaviana iray tezitra aminao mandritra ny fotoana tsy ampoizinao tsara.
Saingy rehefa nihalehibe aho dia nanomboka nahatakatra ny faniriako azy bebe kokoa noho ny dadako satria izy nino ato amiko ”
Ny fanerena nataon'ny dadany dia nitarika an'i Federico kely tamin'ny fanaovan-javatra lehibe niaraka tamin'ny klioba raha nandroso tamin'ny laharan'ny tanora izy, nandresy ireo mpifanandrina izay tonga aleha.
Federico Bernardeschi voalohan'ny taona niaraka tamin'i Fiorentina. Sary: IG
Federico Bernardeschi Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Road to Fame Story
Tamin'ny taona 16, i Federico Bernardeschi izay nilalao baolina kitra tsara indrindra tamin'ny androny dia nifarana tamin'ny fanaovana ny ekipa zokiolona niaraka tamin'i Fiorentina. Toy izay noeritreretiny fa mandeha tsara avokoa ny zava-drehetra teo amin'ny fiainany. ny loza no nitranga.
Ny Vaovao Mampalahelo: Nanomboka ny andro nandehanan'i Federico mahantra hanara-maso ara-batana tsy tapaka. Nahita zavatra ny ekipa medaly Florentina, izay nolazain'izy ireo fa tsy mety ao amin'ny vatany no nanosika azy ireo hanao fanadinana bebe kokoa sy Xrays. Androany taty aoriana dia namintina ny ray aman-drenin'i Federico Bernardeschi ny ray aman-dreniny ny zavatra hitan'izy ireo tao amin'ny vatan'ny zanak'izy ireo.
“Ny zanakao lahy manana fo mihalehibe. Tsy azontsika antoka hoe ratsy izany. Na izany aza, ny azo atao dia tsy afaka hanohy ny asany amin'ny baolina kitra izy. ”
Nilaza tamin’ny ray aman-dreniny ny dokotera. Araka ny efa nampoizina, tsy nino azy i Federico, raha ny marina, dia nandà tsy handre izany izy, nikiakiaka .. ”Tsia ... tsy azo atao izany ”. Nanao ezaka be tokoa ny renin'i Federico mba hitazomana ny fitoniana ilay mpilalao baolina be.
Federico Bernardeschi dia voan'ny aretina kankana tamin'ny Cardiomegaly izay midika hoe Lehibe Enlarged. Sary nahazoan-tsary: ​​WebMD
Rehefa avy nanara-maso akaiky an'io toe-javatra io dia nanapa-kevitra farany ny farany fa tsy afaka hilalao baolina i Federico mandritra ny enim-bolana monja, dia nisy fampitam-baovao iray izay nahatonga ny fianakavian'i Bernardeschi hahatsiaro ho maivamaivana. Nandritra ny fotoana niandrasana, dia niezaka ny hitazona ny tenany foana izy amin'izay nambarany ho enim-bolana sarotra indrindra tamin'ny fiainany. Taorian'ny fisavana fanamarihana, ny fitsidihana manokana sy ny fivoriana, dia navela tamin'ny farany i Federico hamerina ny baolina kitra.
Federico Bernardeschi Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Mitsangàna amin'ny tantara
Tamin'ny 20 June 2014, i Federico dia niditra tamin'ny ekipa voalohany teo ambany fiahian'i Vincenzo Montella. Tao anatin'ny telo taona latsaka taorian'ny niantombohany ny asany, (efa 22), tanora i Federico dia natolotra ny satroboninahitry ny kapiteny noho ny nataony matotra, miasa mafy, mahay mandanjalanja ary maso mijery tanjona. Amin'ny maha-mpitarika eo amin'ny 22 taona, dia heverina ho tanora tokoa eo amin'ny tontolon'ny baolina italiana izay itondrana tena fahombiazana.
Ny vanim-potoana manaraka (2015 – 16), Bernardeschi dia nanome ny laharam-pahamehan'ny akanjo 10 teo aloha toa an'i Roberto Baggio. Nandritra ny anjarany koa izy no nahazo ny anarany "Brunelleschi", taorian'ny mpanao tranokala malaza. misaotra ny teknikany sy ny hatsarany ao anaty kianja.
Bernardeschi no nitazona ny akanjo 10 an'ny ekipa marika amboarina izay nandresen'i Roberto Baggio teo aloha. Sary amin'ny sary: ​​blackwhitereadallover
Amin'ny maha-mpitarika charismatic azy eny amin'ny kianja, dia i Federico Bernardeschi dia nomena loka AIAC Football Under-21 Award. Tsy nijanona teo akory ny fahombiazana, fa izy ihany koa no tokana italiana amin'ny laharana ho an'ny ekipa UEFA European Under-21 Championship of the Tournament Championship. Ity mason-kira ity dia nahiratra ny mason'ireo klioba ambony any Eropa.
Lasa iray amin'ireo fananana tanora mafana indrindra amin'ny baolina kitra italiana dia nanintona ireo mpifaninana fototra an'i Fiorentina, Juventus izay nanao azy ho mpilalao ambony indrindra hatramin'ny Baggio (amin'ny 1990) dia namela an'i Florence hiditra ho azy ireo. Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, Federico Bernardeschi dia nanampy ny ekipany handresy saika ny zava-drehetra tamin'ny baolina kitra italiana dia; Serie A, Coppa Italia ary ilay olo-malaza Supercoppa Italiana.
Ny fiakarana sy ny fitsanganan'i Federico Bernardeschi. Sary: Pinterest, FootyAnalyst,
Indray andro hono, ilay zaza tsy nety nifidy kilalao hafa ankoatra ny baolina kitra ankehitriny Niaritra ny meteoric iray izay nalaza eo anoloanay maso. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Federico Bernardeschi Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Relationship Life
Ao ambadiky ny lehilahy mahomby rehetra, dia misy vehivavy gaga iray manakodikodina ny masony. Amin'ity tranga iraisampirenena Azzurri ity, tena nisy ny WAG iray mahafinaritra iray izay lasa sipa. Tsy hafa noho ilay olona tsara tarehy izy Veronica Ciardi.
Hihaona amin'i Federico Bernardeschi sakaiza-Veronica Ciardi. Sary: DropNews
Fantatrao an'i Veronica Ciardi: Teraka tamin'ny ray aman-dreny italiana, i Veronica dia iray amin'ireo mpifaninana ankafizin'ny 2009 italian'i Big Brother. Nandritra ny fotoanany tamin'ny fampisehoana zava-misy, dia namorona fifandraisana tamin'ny mpifaninana iray hafa antsoina hoe Sarah Nile. Ny fifandraisana dia iray izay nahatonga ny faharatsiana tamin'ny fahitalavitra italiana satria io no voalohany sakaiza sipa tantaram-pitiavana hotanterahina amin'ny seho arisialy italiana.
Federico Bernardeschi sakaizany- Veronica Ciardi sy Sarah Nile izay mpankafy azy. Sary: pinkmonster
Nifarana tamin'ny volana septambra 2010 ny fifandraisan'i Veronica sy Sarah taorian'ny fanerena mafy nataon'ny mpanao gazety italiana. Federico Bernardeschi izay sivy taona tanora noho i Veronica dia nanomboka nandao azy taona vitsivitsy taty aoriana taorian'ny nifankatiavany tamin'ny fihaonana voalohany tany Formentera.
Taorian'ny roa taona nahaliana be dia be, Bernardeschi izay tsy nijery ny làlan-dramatoa Big Brother dia nanapa-kevitra ny hanome ny sakaizany izay nolazain'ny gazety italiana, niseho tamin'ny toerana romana.
Bernardeschi dia nanolotra ny sipa tamin'ny sakaizany taorian'ny roa taona niarahany. Sary nahazoan-tsary: ​​forzaitalianfootball
Mampalahelo fa tsy dia nisy vokany tsara ho an'ny mpivady izany fisarahana am-po teo amin'ny 2017 tany am-boalohany. Raha niresaka momba ny zavatra niainany tamin'ny sakaizany i Bernardeschi dia nilaza fa nahatonga azy hivoatra ho olona izy. Taorian'ny dimy volana nisian'ny fisarahana teo amin'izy ireo, dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fisarahana aminy niaraka tamin'ny alàlan'ny Instagram izy.
Taona vitsy taorian'ny niarahan'izy ireo dia nifarana ny krizy roa teo aloha rehefa nifankatia teo izy ireo, ary hitazona ny fifandraisan'izy ireo nandritra ny volana maromaro. Tamin'ny 28 ny volana aogositra 2019 dia lasa ray aman-dreny i Veronica sy i Federico.
Federico Bernardeschi Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Fiainana manokana
Hahafantatra ny fiainan'i Federico Bernardeschi manokana manampy anao hahazo sary tsara kokoa momba ny fomba iainany ny fiainany an-tselatra.
Satria maro tokoa ny marbra fotsy lehibe manodidina azy raha mihalehibe izy, nilaza i Federico fa hianjera amin'ny nofiny indraindray ireo marbra ireo raha mamorona sary eo an-dohany izy rehefa mifoha avy eo am-pandriana. Nanomboka io tranga mistery io fony izy enin-taona.
Mahafantatra an'i Federico Bernardeschi Fiainana manokana any an-tselatra. Sary: Instagram
Sintona ho an'ny alikany: Mpilalao mpilalao baolina kitra malaza, izany hoe C Ronaldo, Neymar, Sanchez sns dia mpankafy alika tena izy. Na ianao aza misy milaza fa tsy misy tsy fivadihana amin'ny lalao maoderina, azo antoka fa tsy miraharaha ny fifandraisan'i Federico sy ny alikany lehibe.
Federico Bernardeschi dia iray amin'ireo tia alika lehibe indrindra amin'ny baolina kitra. Credit any Instagram
Federico Bernardeschi Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny tantaram-pianakaviana Bernardeshi izay nanazava teo aloha, dia mampianatra ireo mpankafy baolina kitra mitolona, ​​nefa maniry ny hahatratra ny fahalavorariana mba hinoana fany fomba tsara indrindra tsy mahatsiaro ho manana fanantenana, dia ny miarina amin'ny faritra mampionona azy ary manao zavatra hafa'. Raha tokony hanaraka ny dadany ao amin'ny Ny hetsika vita amin'ny marbra, i Federico dia nampirehareha ny fianakaviany manontolo manadino ny lasa ny fianakaviany ho an'ny fahaleovantena ara-bola, isaorana ny baolina kitra. Ankehitriny, omeo anao ny fahalalana bebe kokoa amin'ireo olona ao amin'ny fianakaviany.
Momba ny Rain'i Federico Bernardeschi: Tahaka ny ankamaroan'ny ray aman-dreny ao 'Carrara'ny tanànan'i Marble, i Federico dadan'i Alberto dia niasa tao amin'ny orinasa mpanao marika Carrara Marble nandritra ny taona maro. Izy no karazana dadany izay niasa nandritra ny ora maro, nifoha tamin'ny maraina 5, nandao am-piasana tamin'ny 6 maraina ary niverina nody tany amin'ny 6 hariva izy dia haka fitaovam-pitaterana hafa rehefa mandao an'i Opel Vectra mavokely izy hamonjy ny vadiny sy ny zanany lahy ( Federico) ampiasaina amin'ny fanakatonana eo anelanelan'ny trano, hopitaly, sekoly ary ny foibe fanofanana baolina kitra.
Alberto dia manan-kery noho ny nahatonga ny zanany lahy hanana daty voalohany amin'ny laharam-pahamehana izay nanomboka tamin'ny fotoana nitondrany azy ho any amin'ny fivarotana kilalao izay nahalany ny baolina kitra voalohany. Ary koa, manosika azy hanao zavatra tsara kokoa eo am-piandohan'ny fotoana niasa.
Momba ny Renin'i Federico Bernardeschi: Ianao no anarany tsy fantatra toy ny tamin'ny fotoana nanoratana. Na izany aza, ny fampahalalam-baovao italiana dia niasa tamin'ny maha mpitsabo mpanampy tao amin'ny hopitaly tsy lavitra ny tranon'izy ireo ny renin'i Federico. Sarotra izy fa be fitiavana, nefa indraindray nitsipaka ilay kofehy mba hametrahana ny zanany lahy. Ho an'i Federico, eo anelanelan'izy sy ny dadany dia misy fifandanjana tsara (Ny mpilalao Tribune tatitra).
Momba ny Rahalahin'i Federico Bernardeschi: Toa tsy manana anadahy izy, fa manana rahavavy iray i Gaia Bernardeschi, i Federico. Gaia dia fantatra manome fanampiana ny rahalahiny na ianao aza dia midika hoe fandinihana ny toetrany.
Hihaona amin'ny rahavavin'i Federico Bernardeschi- Gaia Berna. Sary: Facebook
Nahasarika ny mpankafy izy rehefa nanao lahatsoratra mampiady hevitra momba ny rahalahiny izy rehefa avy niraviravy tamin'ny klioba taloha Fiorentina. Rahavavin'i Federico Bernardeschi indray mandeha no nilaza;
“Ry rahalahy malala nahafahan'izy ireo namadika mozika ireo Boos mpankafy Fiorentina. Nandihy tamin'ny baolina teo an-tongotrao ianao dia nangina ny kianja,… Rahalahy lehibe ianao !!!. Ry mpankafy Fiorentina malala, malahelo anao aho, saingy toy ny mahazatra dia naneho ny toetrany sy ny mpilalao azy ny rahalahiko. Milamina izao ny rehetra ary mankafy izany izahay ”.
I Giana rahavavin'i Federico Bernardeschi rahavavin'i Giana dia tamin'ny 9 febroary 2018, taorian'ny nahazo fanalam-baraka nataon'ny mpankafy an-trano nandritra ny lalao nandritra ny lalao naharesy azy ny baolina nalafosafo azy tamin'ny antsasa faharoa mba hampangina ny vahoaka.
Federico Bernardeschi Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Lifestyle
Ny fomba fiaina ananan'ireo superstar ambony amin'ny baolina kitra dia mora voamariky ny jet niaviany, ny tranobe lehibe ary ny fahafinaretana tsotra. Federico, ianao dia mpanohitra ny miaina be lavitra noho ny mitondra fiara tsotra, hira iray mampiseho ny fiainana an fomba fiaina antonony.
Bernardeschi dia fanafody manaporofo ny fomba fiaina hafahafa. Sary nahazoan-tsary: ​​maritrano-trano ho an'ny trano, autobytel ary Fiorentina IT
Na dia tamin'ny fivelomany antonony aza dia voaravaka sary sokitra ny rajako telo, ny lampihazo monkey ary setroka vita amin'ny marbra, ny tranom-bahiny, avy amin'ny dadany, avy any Carrara.
Ho an'i Federico, tsy mikasika ny fihenan'ny fijanonana ao an-trano, fa ny fandaniana ny fialantsasatra amin'ny toerana mahafinaritra an-dranomasina.
Federico Bernardeschi mandany ny volany amin'ny fanaovana Vacations Seaside. Sary: Instagram
Federico Bernardeschi Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Untold Facts
Indray mandeha i Alleged dia nanangana zaza mainty: Federico Bernardeschi dia mino fa zava-dehibe ny Football, fa ho azy, ny zavatra lehibe indrindra eto an-tany dia 'fiantrana'. Noho izany Federico sy ny sakaizany- Veronica Ciardi dia ambasadaoro mahafinaritra an'ny Vonjeo ny ankizy fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana. Izany dia nahita fanatsarana teo amin'ny fiainan'ny zazavavy tsara tarehy izay toa eo ambany fiahiany.
Federico Bernardeschi sy sakaiza dia ohatra madio amin'ny olo-malaza fotsy manana fitiavana ny zaza mainty. bola: Instagram
Ny Tattoo an'i Federico Bernardeschi dia mitondra fahatsiarovana ny namana maty: Ankoatra ny tombokavan'ny vavak'i Ave Maria dia i Federico dia manana ny sarin'akanjo ny laharan'ny akanjo efa namoy ny sakaizany taloha. Herinandro vitsy taorian'ny nandehanan'i Davide Astori dia nahazo tombony teo akaikin'ny vavaky ny Katolika nentim-paharazana ny isa.
Federico Bernardeschi dia manome voninahitra an'i Davide Astori miaraka amin'ny Tattoo izay laharany. Sary: aVision ary ThePlayersTribune
Fivavahan'i Federico Bernardeschi: Katolika ny ray aman-dreniny nanangana azy ho katolika ary tena be fitiavana amin'ny fampiharana ny fivavahana Kristiana izy. Porofon'ny fahatsapana ny maha-izy azy ny maha-Katolika azy, dia hita ao amin'ny tanànany tatsy Ave Maria eo amin'ny tanany sy ny sariny miaraka amin'ny papa etsy ambany.
Nanazava ny Fivavahan'i Federico Bernardeschi. Sary: Instagram
Indray mandeha ho lasibatra ho an'ny United: Federico, fony izy mbola tanora dia iray tamin'ireo izay nanan-talenta nankasitraka an'i Sir Alex Ferguson. Ny filohan'i Manchester United teo aloha dia najanona indray ary nampiaiky azy ny hanasonia azy hiverina any 2011. Fantatrao ve?… tsy vita ilay hetsika satria nandresy lahatra azy ny rain'i Federico mba hijanona eo akaikin'ny tanindrazany.
Federico Bernardeschi Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Video Summary
Jereo eto ambany ny famintinana horonan-tsaratry ny YouTube ato amin'ity profil ity. -katsaram-panahy Tsidiho & Misoratra anarana ho antsika Youtube Channel. Tsindrio ihany koa ny lisitry ny fampiasa amin'ny Bell Icon for notification.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra noho ny namaky ny tantaranay momba an'i Federico Bernardeschi Childhood sy ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, miezaka ny hisian ny fahitsiana sy ny rariny isika. Raha mahita zavatra tsy tsara ianao dia miangavy anao hizara izany amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hajainay sy hajainay foana ny hevitrao.
Daty navaozina: 17 jona 2020